Moqdisho | Voice Of Somalia
Maleeshiyaadka Muungaab oo Muqdisho isku fara saaray!
Wararka laga helayo israsaaseyn Isgoyska Sanca ee magaalada Muqdisho ka dhacday ayaa dadku waxay sheegayaan in xaaladu hadda tahay mid cakiran.
Iska horimaadka dhacay ayaa udhaxeeyey Maleeshiyaadka Ilaalada uah Muungaab,iska horimaadka ayaa ka dambeeyey kadib markii ay isku dhaceen labo taliye Unug oo kawada tirsan Maleeshiyaadka ilaalada Muungaab sidaana ay isku dileen.
Weli ma jirto hadal kasoo baxay Maamulka Gobolka Banaadir oo looga hadlayo iskahorimaadka khasaaraha geystay ee ka dhacay Maanta barqadii Isgoyska Sanca ee magaalada Muqdisho.
DHAGEYSO:- Wariyaasha Idaacadda Dowladda oo ka Cabanaya Mushaar La’aan iyo xarig loo gaystay
Wariyaal ka tirsan Radio Muqdisho oo ah idaacad ku hadasha afka dowladda ayaa shaaca ka qaaday in wasiirka warfaafinta Mustaf dhuxulow iyo agaasimayaasha qeybaha ay ka kooban tahay wasaarada ay dhunsadeen mushaaraadkii ay lahaayeen wariyaasha ka howlgala Idacaadaha Dowladda
Musuqmaasuqa ay ku caan bexeen madaxda dowladda ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay dhammaan waaxyaha dowladda iyadoo maalin walba war baahintu sii deyso shaqaalohooda oo ka cabanaya mushaar la’aan.
Wariye majaajiliiste ah oo ka tirsan war baahinta dowladda ayaa dhawaan afka labadi yeeray kadib markii uu xamili kari waayay mushaar la’aan muddo ku dhow sannad.
Cabdullaahi Muuse Kal-gacal oo saxaafadda kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inaanu muddo todobo bilood ah qaadan wax mushaar ah, saasoo ay tahayna uu joogto u shaqeeyo.
Wuxuu sheegay in wasaaradda war faafintu ay lacago aad u badan ku cunto fariimaha uu isagu duubo taa badalkeedana aanan waxba laga siin.
Wararkii ugu dambeeyay xaalada Wariye Galgacal waxey sheegayaan in ciidamada Nabad sugidda dowladda ay xabsiga dhigeen wariyaha kadib markii warbaahinta qeybaheeda kala duwan uu ka cabaaday islamarkaana uu sheegay in mushaar la’aan uu ka cabanayo.
HOOS KA DHAGEYSO CODKA WARIYAHA!!
Xasan Nuur “Gummaadka Dhalinyarada Dowlad Laguma Noqdo Reer Muqdishana looma caga jugleyn karo”.
Posted on July 26, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Kadib fashil dhanka ammaanka ah oo aan kasoo waaqsi laheyn oo ay dhammaan laamaha dowlada Federaalka ah lakulmeen 25 maalmood gudahood ayay ku dhaqaaqeen wax u eg gummaad .
Waxgaradka magaalada Muqdisho iyo siyaasiyiinta ayaa jawaab celino ka bixiyay ammaan darrada caasimadda ah iyo tallaabooyinka ay ku dhaqaaqeen madaxda dowladda waxa ay soo kordhin karto.
Siyaasig Xasan Nuur oo katirsan waxgaradka Muqdisho ayaa sheegay in dilkii xildhibaanad Saado Cali iyo weerarkii madaxtooyada uu ka carreysiiyay Xasan Sheekh iyo saraakiishiisa ammaanka kadibna ay sameeyeen wax ay iyagu u arkeen aargoosi.
“falkii dilka ahaa ee maanta ka dhacay Iskoola Boliisiyo wuxuu u muuqday caro ay madaxda dowladdu kala dul dhaceen maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe”ayuu yiri Xasan Nuur.
Dilalka dhalinyarada lala xariirinayo xarakada Al Shabaab ayaa sare uqaadi kara naceybka loo qabo dowladda Federaalka iyo shisheeyaheeda.
“Tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii dhexe Muqdisho waxay soo martay maamullo kala duwan dadka degganna waxbadan oo waaya aragnimo ah ayay leeyihiin,maanta in wiilashii reer Muqdisho xabsiyada lagasoo baxo oo banaanada lagu toogto waxay sii xoojinaysaa naceybka loo qabo xukuumadda Villa Somalia dadkuna ay shabaabka gabaad siiyaan”Xasan Nuur.
Ugu dambeyntii siyaasigan ayaa ugu baaqay Hoggaanka DF-ka in ay xilalka ay hayaan iska casilaan ayna allaah uga towbadkeenaan la shaqeynta ciidanka shisheeye ee soomaaliya kusoo duulay.
DHAGEYSO:-Xildhibaan Cali Nuur “Al Shabaab Waxay Madaxtooyada Ku Qaadeen Weerar Guuleystay”
Posted on July 13, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Xildhibaan Cali Nuur oo katirsan baarlamaanka DF-ka ayaa dhaleecayn kulul ujeediyay Xasan Sheekh iyo taliyaasha ciidamada in ay ka hortegi waayeen weerarada ay Shabaabul Mujaahidiin ku qaaday Villa Somalia iyo xarunta baarlamaanka.
“Mafashilmin weerarada Shabaab ku qaadeen xarumaha muhiimka ah,madaxda dowladdu been bay sheegeen markii ay dhaheen weerarada shabaab ayaa fashilmay”ayuu yiri Xildhibaan Cali Nuur.
Isagoo lahadlayay idaacadda BBC-da ayuu banaanka soo dhigay xaqiiqda ka dhaxjirta hoggaanka DF-ka wuxuuna qiray awoodda dhan walba ah oo ay shabaabul Mujaahidiin Muqdisho ku leedahay.